အိုဒီယာဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
၃၅ million (၂၀၁၁–၂၀၁၉)
L2 speakers: ၄ million
အိန္ဒိယ (Jharkhand,West Bengal)
Odisha Sahitya Akademi, Government of Odisha)
အရင်းအမြစ် – ပါဝင်သော ကုဒ်
အောရီ – Odia
အိုဒီရာ ( ଓଡ଼ିଆ link=| ဒီအသံအကြောင်း Oṛiā (ကူညီ·ချက်လက်) ထို့အပြင်) အိုဒီရာ အဖြစ်ရိုမနိင် မှာလည်းယခင်ကအိုရီရာအဖြစ်လူသိများတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အင်ဒို အာရိယန်ဘာသာစကား ထဲမှာပြောပြီ အိန္ဒိယပြည်နယ် ဩရိဿပြည်နယ် ။
သူတို့သည်လူဦးရေ၈၂% ဘာသာစကားများကိုပြောဆိုသော ဩရိဿ (ယခင်အိုရိစာဟုလူသိများသော)  တရားဝင်ဘာသာစကား ဖြစ်ပြီး  အနောက်ဘင်္ဂလား ဒေသများတွင်လည်း  ဂျာခံ၊ ချဒီစကာ့၊  အန္ဓရပြည်နယ်  တွင်ပြောဆိုကြသည်။ အန္ဓရဒေသရှိ  အိုဒီရာသည် အိန္ဒိယ၏တရားဝင်ဘာသာစကား များစွာအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အိုရိစာ၏တရားဝင်ဘာသာစကားနှင့်ဂျာခံ၏တရားဝင်ရုံးသုံးဘာသာစကားဖြစ်သည်။    ချဒီစကာ့တွင်အနည်းဆုံးလူ ၁ သန်းနေထိုင်သောလူဦးရေကလည်းထိုဘာသာစကားကိုပြောဆိုကြသည်။
အိုဒီရာသည်စာပေသမိုင်းကြောင်းရှည်လျားပြီးအခြားဘာသာစကားများမှကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ငှားရမ်းခြင်းမရှိခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ အိန္ဒိယတွင်ဂန္ထဝင်ဘာသာစကား အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည့်ဆဌမအိန္ဒိယဘာသာစကားဖြစ်သည်။     အိုဒီးယားတွင်အစောဆုံးသိရှိခဲ့သောကမ္ပည်းသည်အေဒီ ၁၀ ရာစုမှစတင်ခဲ့သည်။ 
အိုဒီရာအဓိကအားအိုဒစ်စာပြည်နယ်အတွက်ပြောပြီဒါပေမယ့်ကဲ့သို့သောအိမ်နီးချင်းပြည်နယ်များအတွက်သိသာထင်ရှားသော အိုဒီရာစကားပြောလူဦးရေရှိနေသည် အန္ဓရဒေသပြည်နယ်၊ မဇ္ဈဒေသ ပြည်နယ်၊ ဂျေဟာခန်းပြည်နယ်မှာ နှင့် ချဒီစကာ့ ။ 
အလုပ်သမားအရေအတွက်တိုးများလာခြင်းကြောင့်အိန္ဒိယအနောက်ပိုင်း ဂူဂျာရတ် တွင် အိုဒီရာဟောပြောသူများလူဦးရေအများအပြားရှိသည်။  အိုဒီရာပီ၏သိသာထင်ရှားသောနံပါတ်များမြို့များတွင်လည်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည် ဝိဇာခ်ပတာနက်၊ ဟိုက်ဒရာဘတ်၊ ဖော်ဒဂျယ်လီ၊ ဘန်ဂလို၊ ချင်နိုင်း၊ ဂိုအာ၊ မွန်ဘိုင်း၊ လိုက်ပို၊ ကျန်ခြစ်ပူရ၊ ဘိုတာ၊ အမယ်ဒါဘတ်၊ နယူးဒေလီ၊ ဂိုဟားသီး ဂူဝါဟာတီ၊ ရှီလွန်၊ ဖုနာ၊ ခုခေါင်၊ ဂျာမူ၊ နှင့် ဆိုဘာဆာ  ၂၀၁၁ ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်းအရအိန္ဒိယအတွက်အိန္ဒိယလူမျိုး၏ ၃.၁% အိုဒီရာစပီကာများမှာ  အိုဒစ်ဆာပိုင်ထားတဲ့ ၉၃% ၏။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိအိုဒီရာစကားပြောသူဦး ရေသည်သန်း ၅၀ အထိရှိပြီးစုစုပေါင်းအရေအတွက်မှာကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိနိုင်ငံများစွာတွင်အများဆုံးဖြစ်သည်။   သူတို့အရှေ့ပိုင်းရှိ ထိုင်း ၊ အင်ဒိုနီးရှား ကဲ့သို့သောသိသာထင်ရှားသောနေရာများရှိသည်။ အဓိကအားဖြင့် ဆာဒါဘာ မှသယ်ဆောင်လာသည်။ အိုဒစ်ဆာမှရှေးဟောင်းကုန်သည်များသည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတူ ရှေးရိုးအရောင်းအဝယ်လုပ် စဉ်အတွင်း  နှင့် အမေရိကန် ၊ ကနေဒါ ၊ ဩစတြေးလျ နှင့် အင်္ဂလန် ဩစဩေးလျ သည့်အနောက်နိုင်ငံများ။ ဘာသာစကားလည်းပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မလေးရှား၊ ဖီဂျီ၊ မော်ရေးရှပ်, သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံများတွင်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ အရှေ့မြောက်ရှိ ဘိုနက် အသိုင်းအဝိုင်းကယင်းကိုမိခင်ဘာသာစကားအဖြစ်ပြောဆိုကြသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘာသာစကားကို လေ့လာသင်ယူရန်ရွေးချယ်လေ့ရှိသော်လည်းအသုံးပြုမှုသည်တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာသည်။
အိုဒီရာ၏ပြောသောစံသည် အိုဒီရာစာပေစံနှုန်းနှင့်မတူပါ။ သူတို့သည်မတူကွဲပြားသောမျိုးနွယ်စုစကားပြောသူများအကြားစာပေနှင့်ဆက်သွယ်ရေးတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်အိုရိဆာပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတစ်ဝက်၊ ခိုတာ၊ ပူရီ၊ နာယဂါ၊ ခုတ်တုတ်၊ ဂျာပို၊ ဂျာကဆင်ငပူရ၊ ခံရာပါရာ နှင့် ဒီအေချင်ခါနောင်၊ ခရိုင်များ၌ကွဲပြားမှုများစွာမရှိပဲ ပြောဆိုကြသည် ။ 
အရှေ့မက်ဂဒန်ဘာသာစကား၏ပရိုတိုဘာသာစကားများ။ Proto-Odia (Odra Prakrit) ကိုကွဲလိုက်တဲ့ Proto-Magadhan (Magadhi Prakrit) မှမြင်နိုင်ပါတယ်။
အိုဒစ်ဆာ၊ ရစ်နာဂျီရီ ပြတိုက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း အိုဒီရာဇာတ်ညွှန်း၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့အသေးစိတ်ဇယား
အိုဒီရာသည် အင်ဒိုအာရိယန်ဘာသာစကားမိသားစုမှပိုင်ဆိုင်သော အရှေ့ အင်ဒိုအာရိယန် ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁,၅၀၀ ကျော်ကအိန္ဒိယအရှေ့ပိုင်းတွင်ပြောဆိုခဲ့သောအိုဒီရာပရာခရစ်မှတိုက်ရိုက်ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆပြီးအစောပိုင်း ဂျိန်း ကျမ်းများတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။  အိုဒီရာသည်အခြားမြောက်အိန္ဒိယအင်ဒီးယန်းဘာသာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပါရှန်း နှင့် အာရဗီ တို့၏လွှမ်းမိုးမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။
[ ကိုးကားရန်လိုအပ်သည် ]
အိုဒီရာတွင်ဗျည်း ၂၁ လုံး၊ တဝက် ၂ ခုနှင့်သရသံ ၆ ခုရှိသည်။
ရှည်လျားသောသရသံများမရှိပါ။ /o/ မှအပအက္ခရာများအားလုံးတွင် နှာသီး ပါ ၀ င်သော်လည်း၎င်းသည်အမြဲတမ်းခြားနားခြင်းမရှိပါ။ နောက်ဆုံးသရအက္ခရာများကိုစံဘာသာစကားဖြင့်အသံထွက်သည် ဘင်္ဂါလီ [pʰul] "ပန်းပွင့်" အိုဒီရာ [pʰulɔ] contra ။
အိုဒီရာဘာသာစကားသည်အိုဒီရာလက်ရေး ကိုအသုံးပြုသည်။ အဓိကအားဖြင့်အိုဒီရာ ဘာသာစကားနှင့်မကြာခဏ ကွီး၊ ဆံတာလီ၊ယိုနှင့် ချဒစ်စကာ့ရီမကြာခဏရေးသားလေ့ရှိသည့်ဗြဟ္မာအက္ခရာဖြစ်သည်။ အဆိုပါဇာတ်ညွှန်းနှစ်ပေါင်း၁၀၀၀ကျော်ကျော်တီထွင်ခဲ့သည်။ အစောဆုံးလက်ရေးသဲလွန်စကိုအေဒီ ၁၀၅၁ မှစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သာသနာအက္ခရာသို့မဟုတ်အာဘုကီတာဖြစ်ပြီးဗျည်းအက္ခရာများအားလုံးတွင်အတွင်း၌သရအက္ခရာများပါရှိသည်။
အိုဒီရာဆိုသည်မှာစာလုံးအက္ခရာတစ်ခုသို့မဟုတ်အာဘုကီတာဖြစ်ပြီးဗျည်းအက္ခရာများအားလုံးတွင်အတွင်း၌သရအက္ခရာများပါ ဝင်သည်။ တိုက်ရိုက် (အထက်၊ အောက်၊ မတိုင်မီသို့မဟုတ်သူတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောဗျည်းအက္ခရာပြီးနောက်) ပေါ်လွင်သောသရသံပုံစံကိုပြောင်းလဲရန်အသုံးပြုသည်။ သရအက္ခရာ၏အစတွင်သရအက္ခရာများပေါ်လာပါကသူတို့သည်သီးခြားအက္ခရာများအဖြစ်ရေးသည်။ အချို့သောဗျည်းများအတူတကွဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ၊ အထူးတွဲဖက်သင်္ကေတများကိုဗျည်းအက္ခရာတစ်ခုစီ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုပေါင်းစပ်ရန်အသုံးပြုသည်။
အိုဒီရာအက္ခရာ၏ကွေးသောပုံပန်းသဏ္ဌာန်သည်စွန်ပလွံပင်များပေါ်တွင်ရေးသားခြင်း၏ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ အကယ်၍ သင်သည်မျဉ်းဖြောင့်များစွာကိုအသုံးပြုပါကမျက်ရည်ယိုလေ့ရှိသည်။ 
တိုက်ရိုက် ଼ ଽ ା ି ୀ ୁ ୂ ୃ ୄ େ ୈ ୋ ୌ୍ଁ ଂ ଃ
ଅଆଇଈଉଊଋୠ ଌୡଏଐଓଔଓଁ [ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ]
କଖଗଘଙଚଛଜ ଝଞଟଠଡ (ଡ଼) ଢ (ଢ଼) ଣତଥଦଧନପଫ ବଭମଯରଳଵଶଷସହକ୍ଷୟଲୱଜ୍ଞ [ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ]
Odia တွင်ရေးသားခဲ့သည်:୍ଛେଦଏକ: ସବୁମନୁଷ୍ୟଜନ୍ମକାଳରୁସ୍ୱାଧୀନ။ ସେମାନଙ୍କରମର୍ଯ୍ୟାଦାଓଅଧିକାରସମାନ။ ସେମାନଙ୍କଠାରେପ୍ରଜ୍ଞାଓବିବେକନିହିତଅଛି။ ପରସସେମାନେପରପରପପରତିରତିରାତୃଭାବଭରାତୃଭାବରାତୃଭାବକାରପରସପରସପରସ
အိုဒီရာတွင်ပြောဆိုသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားခဲ့သည် - လူသားအားလုံးသည်လွတ်လပ်စွာတန်းတူညီမျှဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာမွေးဖွားလာကြသည်။ ၎င်းတို့သည်ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်ရှိပြီး၎င်းတို့သည်ညီအစ်ကိုအသင်းအပင်း၏စိတ်ထားနှင့်တစ်ဦးကိုတစ် ဦး ပြုမူဆက်ဆံသင့်သည်။
ဂူဂယ်လ်က၂၀၂၀ခုနှစ်တွင်အတွက်အိုဒီရာ များအတွက်ပထမဦးဆုံးအလိုအလျောက် ဘာသာပြန်ဆိုသူမိတ်ဆက် 
↑ ၁.၀ ၁.၁ တမ်းပလိတ်:E22
↑ Scheduled Languages in descending order of speaker's strength – 2011။ Registrar General and Census Commissioner of India။
↑ "Jharkhand gives second language status to Magahi, Angika, Bhojpuri and Maithili"၊ The Avenue Mail၊ 21 March 2018။
↑ West Bengal Official Language Act, 1961
↑ Roy, Anirban (28 February 2018). Kamtapuri, Rajbanshi make it to list of official languages in. India Today. Archived from the original on 30 March 2018. Retrieved 30 March 2018. Unknown parameter |url-status= ignored (help)
↑ Odisha Sahitya Academy။ Department of Culture, Government of Odisha။9March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ (2013) "အိုဒီရာ", Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ "Constitution amended: Orissa is Odisha, Oriya is Odia"၊ hindustantimes.com/၊ 2011-09-06။ 2018-01-31 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Linguistic Survey of India: Orissa။ 20 February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ordeal of Oriya-speaking students in West Bengal to end soon။ The Hindu (21 May 2009)။ 30 January 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၃.၀ ၁၃.၁ Govt to provide study facility to Odia-speaking people in State။ The Pioneer။ 30 January 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Archived copy။9December 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Oriya gets its due in neighbouring state- Orissa- IBNLive။ Ibnlive.in.com (2011-09-04)။ 2012-11-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Oriya second language in Jharkhand။ The Times of India (2011-09-01)။
↑ Bengali, Oriya among 12 dialects as 2nd language in Jharkhand (2011-08-31)။ 2012-11-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Archived copy။
↑ "Odia gets classical language status"။
↑ Odia becomes sixth classical language။
↑ Milestone for state as Odia gets classical language status။
↑ Classical Odia။
↑ James Minahan (2012). Ethnic Groups of South Asia and the Pacific: An Encyclopedia. ABC-CLIO, 233. ISBN 978-1-59884-659-1။
↑ A Little Orissa in the heart of Surat – Ahmedabad News။
↑ Danesh Jain (2007). The Indo-Aryan Languages. Routledge, 445. ISBN 978-1-135-79711-9။
↑ Number of Odia speaking people declines: Census report။ sambad။
↑ Oriya language။ “Oriya language, also spelled Odia, Indo-Aryan language with some 50 million speakers.”
↑ Man and Life။
↑ Construction of an identity discourse: Oriya literature and the Jagannath cult (1866–1936)။
↑ Oriya at Ethnologue (18th ed., 2015)
↑ Caldwell, R. (1998). A Comparative Grammar of the Dravidian Or South-Indian Family of Languages. Asian Educational Services, 125. ISBN 978-81-206-0117-8။
↑ Google Translate supports new languages for the first time in four years, including Uyghur (in en) (26 February 2020)။ 27 February 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
အိုဒီယာဘာသာစကား at DMOZ
Praharaj, GC Purnnachandra Ordia Bhashakosha (အိုဒီရာ-အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်) Cuttack: Utkal Sahitya စာနယ်ဇင်း, 1931-1940 ။
ပြည့်စုံသောအင်္ဂလိပ် - အိုရီရာအဘိဓာန် (1916-1922)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အိုဒီယာဘာသာစကား&oldid=530937" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၀၊ ၀၃:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။